ယ​ခု ​သင်​တန်း​မှာ ​သင်​ပေး​နေ​တဲ့ ​သင်​ခန်း​စာ​များ​ကို Facebook ​မှာ Download ​ယူ​နိုင် ​ကြည့်​ရှု့​နိုင်​ပါ​ပြီ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
chan myae November 27, 2013 at 11:36 PM
Thein Zan November 28, 2013 at 2:16 PM
​အ​မှန်​တွေ​ပဲ။ ​ကို​ညီ​မင်း ​လို​နိုင်​ငံ​သား​တ​ယောက်​ရှိ​နေ​တာ ​ကျွန်​တော်​တို့.​နိုင်​ငံ​အ​တွက် ​ဂုဏ်​ယူ​စ​ရာ​ကောင်း​ပြီး ​ခွန်​အား​ဖြစ်​စေ​ပါ​တယ်။
mg min tun November 29, 2013 at 11:51 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​မှန်​တယ် ​အ​မြဲး​လေး​စာ​တယ် ။
T M Htun November 29, 2013 at 11:53 AM
​အ​ကို့​ကို ​အား​ကျ ​ပါ​တယ်​ဗျာ..​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ ​အ​ကို့​လို ​လူ​မျိုး​တွေ​ရှိ​တာ ​ဂုဏ်​ယူ​စ​ရာ​ပါ...
Phay Thein December 1, 2013 at 10:21 AM
​အ​ကို ​ကြိုး​စား​ပြီး​သိ​ရှိ​လာ​တဲ့ ​ပ​ညာ​တွေ​ကို ​အ​ကို​ပြန်​လည်​မျှေ​ဝ​ပေး​လို့ ​ကျွှန်​တော်​တို့​တွေ ​မ​သိ​ရှိ​သေး​တဲ့ ​ပ​ညာ​တွေ​တိုး​လာ​တာ​ပါ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ IT ​လော​က​အ​တွက် ​ပ​ညာ​ပ​ဒေ​သာ​ပင်​ကြီး​ပါ​ဘဲ ​အ​ကို။
zuezue December 1, 2013 at 11:15 AM
​အ​ကို​က​တ​ကယ်​ကို​တော်​တယ်​နော် ​နောက်​လဲ video ​သင်​ခန်း​စာ​တွေ​ထက်​ပြီး​တင်​ပေး​ပါ​ဦး​နော်..
Ngwe Win December 6, 2013 at 1:55 PM
I want to be like you my Brother. I want to help people like you.
​မင်း ​ဇော် December 13, 2013 at 9:35 AM
​အ​ကို့​ကို​အ​ရမ်း​လေး​စား​တယ် ​အား​လဲ​ကျ​တယ် ​အ​ကို​က​တ​ကယ်​တော်​ပြီး ​စိတ်​ထား​လဲ​ကောင်း​တယ်​နော် ​နောက်​လည်း​ဆက်​လက်​မျှေ​ဝ​ပေး​ပါ​နော် ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်....
NICE December 15, 2013 at 7:47 AM
kyaw thu hlaing December 17, 2013 at 5:21 PM
​အ​ကို​မှန်​တယ်၊ ​ဆက်​သာ​လုပ် ​အား​ပေး​နေ​ပါ့​မယ်
nyi lay December 19, 2013 at 1:01 AM
ှ​ဆ​ရာ​ရေ facebook ​က video ​တွေ့​ကို ​ဘယ်​လို့ download ​ယူ​ရ​မ​လဲ ​မ​သိ​လို့​ပါ ​သိ​တဲ့​အ​ကို​အ​မ​တို့​လည်း ​တစ်​ချက်​လောက်​ကူ​ညီ​ပြီး ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​နော်.....
nyi lay December 19, 2013 at 1:06 AM
ှ​ဆ​ရာ...​ရေ facebook ​က video ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို download ​လုပ်​ရ​လဲ ​မ​သိ​လို့​ပါ ​သိ​တဲ့​အ​ကို ​အ​မ​တို့​လည်း ​ညီ​လေး​ကို ​ပြော​ပြ​ပေး​ကြ​ပါ​လား...​အား​လုံး​ကို​လေး​စား​ပါ​တယ်....
tunlin December 19, 2013 at 6:06 PM
moeoo khin December 24, 2013 at 12:38 PM
Mediafire app​ရှိ​ပြီး login​လုပ်​​မ​ရ​ဖြစ်​​​နေ​တာ ​ဘယ်​​လို​လုပ်​​ရ​မ​လဲ​ဗျ
kpgpyaephyo January 17, 2014 at 12:45 AM
​ကြိုး​စား​ပါ​အ​ကို​တ​ကယ်​ကို​စိတ်​ထဲ​မှာ​ရှိ​တဲ​အ​တိုင်း​ပြော​တာ​ပါ ​အ​ကို​ကို​ပြော​နေ​တဲ​သူ​တွေ​က​လည်း ​သင် ​တန်း​တွေ​တက် ​သူ​ငယ်​ချင်း ​ပတ်​ဝန်​ကျင် ​က ​နေ ​အ​သိ​တွေ​တိုး​ပွား​လာ​ကြ​တဲ​သူ​တွေ​ဖြစ်​မှာ​ပါ ​ကျ​နော်​တို​က ​တော့​သင် ​တန်း​လည်း​မ​တက်​နိုင် ​အ​ကို​တို့​လို​နည်း​ပ​ညာ​ဝေ​မျှ​သူ​တွေ​ဆီ​က​တ​ဆင့်​တ​ပည့်​ခံ​ကြ​ရ​တာ​ပါ ​တ​ကယ်​ကို​ဆ​ရာ​တွေ​ပါ ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​မ​တက် ​ရ ​ပေ​မဲ့ ​ဆ​ရာ​တို့​က ​တ​ကယ်​ကို ​အ​သ​ပြာ ​အ​တွက်​ဆ​ရာ​လုပ်​နေ​တာ​မ​ဟုတ် ​ကျ​နော်​တို့​စ​လေ့​လာ​တဲ​သု​တွေ​သိ​ပါ​တယ် ​ကျ​နော်​ဆို​ဘာ​မ​ကို​မ​သိ​တာ​ပါ ​ကျ​နော်​သိ​တာ​ကို​ပြော​ပြ​ရင်​လည်း ​သူ​တို​တွေ​အ​ကုန်​ကျ​နော်​ထက်​အ​ရင် ​ကွန်​ပြူ​တာ ​ကိုင်​ကြ​တာ​လေ
moe lay January 17, 2014 at 8:23 PM
​တ​ကယ်​တော့ ​ခင်​ဗျား​ရေး​ထား​တာ​မှာ​လူ​မျိုး​ရေး​လို့​လဲ​ပါ​တယ်၊ ​တိုင်း​ပြည်​ရေး​လည်း​ပါ​သေး​တယ်၊ ​နည်း​ပ​ညာ​ကိ​စ္စ​တွေ​လည်း​ပါ​သေး​လေ​ရဲ့၊ ​ကိုယ့်​ကို​စွပ်​စွဲ​တယ်​လို့ ​ခံ​စား​ရ​တဲ့​အ​ကြောင်း​လေး​ပါ​သေး​တယ်၊ ​အင်း​ပြော​ရ​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ဆုံး​မယ်​မ​ထင်​ပါ​ဘူး ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဟိုး​မား​ရဲ့​က​ဗျာ​လေး​ကို​တော့​ဖတ်​စေ​ချင်​တယ်
​အို ​ဗျိုင်း​တစ်​စု ​မင်း​ကို ​ကျိန်​ဆဲ​လေ​ရဲ့
​အို ​ဗျိုင်း​ပျံ​တာ ​သိပ်​ညီ​ညာ​တယ်
aungkoko January 18, 2014 at 10:33 AM
blue sky January 26, 2014 at 8:31 AM
GREEN FIREFLY February 14, 2014 at 5:23 PM
yemin soe October 31, 2014 at 8:22 PM
win aung October 8, 2016 at 7:46 PM
CLAY October 10, 2016 at 6:02 PM
CLAY October 10, 2016 at 6:03 PM
kyaw aiyara October 21, 2016 at 1:04 PM
kyaw aiyara October 21, 2016 at 1:05 PM